सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड, यसकारण मूल्य अझै बढ्न सक्छ – Jaljala Online
सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड, यसकारण मूल्य अझै बढ्न सक्छ
Posted on June 23, 2019 Author Jaljala Online	Comment(0)
असार ८, काठमाडौं । सुनको मूल्य लगातार बढिरहेको छ । यो खबर एलिजा उप्रेतीले रातोपाटी अनलाइनमा लेखेकी छन् ।
विश्व अर्थतन्त्रमा अहिले लगानीकर्ताहरू सुनतर्फ आकर्षित भएको लगातार बढिरहेको सुनको मूल्यले पुष्टि गर्छ । आज सुन तोलामा ६५ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । शुक्रबार पनि यही मूल्यमा कारोबार भएको थियो । यो मूल्य नेपाली बजारको हालसम्मकै उच्च हो ।
सरकारले बजेटमार्फत सुन आयातमा भन्सार महसुल बढाएपछि सुन लगातार बढ्न थालेको हो । अहिले नेपालमा सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ ।
इरान र अमेरिकाको राजनीतिक युद्ध, अमेरिका र चीनको व्यापारिक युद्ध तथा भारत र अमेरिकाको व्यापारिक युद्धजस्ता कारणले सुनको मूल्य बढेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
सुनलाई तरल पुँजीको रूपमा लिने गरिएको छ । यही तरल पुँजीका रूपमा लिएको सुन पछिल्लो समय बढिरहँदा कतिपयलाई आफूसँग भएको सुन बेचेर नगद हात पार्ने सोच पनि होला । तर व्यवसायीहरू अझै सुनको मूल्य बढ्न सक्ने बताउँछन् । तत्काल ठूला देशहरूको युद्ध मत्थर हुने सङ्केत नदेखिएको सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष मणिरत्न शाक्यले बताए ।
खासगरी नेपालमा सुनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारले निर्धारण गर्छ र सुनको किनबेच डलरमा हुन्छ । तर अमेरिका पटक पटक कुनै न कुनै देशसँगको विवादमा फस्ने गरेको छ । यसले गर्दा ग्लोबल लगानीकर्ताहरूले गर्ने डलरको लगानी सुनतर्फ लगाउने गरेका छन् ।
तर पछिल्लो मूल्य भने नेपाल आउँदा दुई गुणा बढ्नुमा सरकारले बजेटमार्फत सुनको आयात गर्दा बढाएको भन्सार महसुल वृद्धि नै हो । सरकारले बजेटमा सुनमा प्रतितोला एक हजारको दरले भन्सार महसुल वृद्धि गरेको छ । १० ग्राममा ८ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
सुन अझै बढ्छः मणिरत्न शाक्य
सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष मणिरत्न शाक्य ग्लोबल अर्थतन्त्रमा लगानीकर्ताहरू अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न डराएकाले सुनमा लगानी आकर्षित हुन थालेको बताउँछन् ।
शाक्य भन्छन्, ‘इरानले अमेरिकी जासुसी ड्रोन खसालेपछि थप द्वन्द्व चर्कने देखिएको छ । अमेरिकाले पर्सियन खानीमा अचानक सेना तैनाथ गरेको छ । इरान र अमेरिकाको राजनीति युद्ध सुरु भएको छ । ग्लोबल मार्केटमा लगानीकर्ताहरू अरू क्षेत्रको लगानीबाट त्रसित भएर सुनतर्फ लागेका छन् ।’
अर्कोतर्फ अमेरिका र चाइनाको व्यापार युद्ध निरन्तर भइरहेको छ । हालसम्म उनीहरू कुनै मिलन विन्दुमा पुग्न सकेक छैनन् । एसियन क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू यो डरले गर्दा पनि आफ्नो लगानी सुनमा केन्द्रित गराउन थालेका छन्, शाक्यले भने ।
भारत र अमेरिकाको पनि व्यापार युद्ध सुरु भएको छ । अमेरिकाले भारतको सामान आायत गर्दा ट्याक्स बढाउने, त्यसको विरुद्धमा अमेरिकाले उत्पादनहरूलाई उनीहरूको देशमा कर बढाउने जस्ता द्वन्द्व देखिएको छ ।
शक्ति राष्ट्रहरूबीचको द्वन्द्वका कारण सुनको भाउ तलमाथि हुने गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ बढ्दा नेपालमा स्वतः बढ्छ । उनीहरूकै दरमा नेपालमा सुन आउँछ । नेपालभित्र आइपुग्दा दोब्बर हुन पुग्छ । यसको कारण भनेको भन्सार दर नै हो ।
सुनको मूल्य ठूला देशहरूको युद्ध के हुन्छ, त्यसमा भर पर्ने भएको बताउँदै शाक्यले अझै यो द्वन्द्व मत्थर हुने नदेखिएकाले अझै केही दिन सुन पुरानो मूल्यमा फर्कन नसक्ने जनाए ।
नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले प्रत्येक दिन अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको आधारमा नेपालमा सुनको मूल्य तोक्ने गरेको छ ।
व्यवसायी आचार्यको हत्या आरोपमा ३ जना पक्राउ (नामसहित)
जेठ ७, काठमाडौं । करिब ३ महिनाअघि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–१ मा हत्या गरिएका व्यवसायी चन्द्रप्रसाद जैशी आचार्यको हत्यामा संलग्न भएको आशंकामा ३ जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा बुद्धपथमा पसल सञ्चालन गर्दै आएका नन्दकल विष्ट, उनका श्रीमान कृष्ण विष्ट र छोरी विन्दु विष्ट छन् ।जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतका प्रमुख एसपी वसन्त रजौरेले उनीहरुविरुद्ध सोमबार ज्यान […]
काठमाडौं मलको भाडाबापतको १२ करोड रुपैया सञ्चय कोषमा नपुग्दै यसरि हुन्छ गायब !
जेठ ३, काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषद्वारा सञ्चालित सुन्धारास्थित ‘काठमाडौं मल’काे भाडाबापतको १२ करोड रुपैयाँ केही व्यक्तिको मिलेमतोमा गायब पारिएको खुलेको छ। द काठमाडौं मल व्यापार संघका तत्कालीन पदाधिकारीहरु र सञ्चय कोषका कर्मचारीको मिलेमतोमा उक्त रकम गायब पारिएको भन्दै संसदको लेखा समितिमा उजुरी परेको छ। संघका पदाधिकारीले २०७१ साल मंसिरदेखि २०७२ असोजसम्मको भाडा त्यहाँका व्यवसायीबाट […]
भारी वर्षाको सम्भावना, कहाँ-कहाँ छ बाढीको जोखिम ? पढ्नुहोस
इरानसँग युद्ध लड्न उद्यत अमेरिका, अब के गर्लान डोनाल्ड ट्रम्प ?